[Editorial] Macky Sall, shan sano oo kelinimo ah - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA [Editorial] Macky Sall, shan sano oo kelinimo ah - JeuneAfrique.com
[Editorial] Macky Sall, shan sano oo kelinimo ah - JeuneAfrique.com
Madaxweyne Macky Sall wuxuu taageerayaa taageerayaashiisa intii uu socday ololihii Guediawaye bishii February 20 2019. © Sylvain Cherkaoui ee JA
Bilowgii xilli-labaad oo ay la socdaan fanaan ... Madaxa Senegal-ka ee dowladaha Senegal wuxuu doonayaa in uu wax ka qabado gacmihiisa isla markaana dib u hagaajiyo dib u habeynta. Cawaaqi: waa arrin baaxad leh oo ka dhex jirta dawladda iyo baabi'inta ra'iisal wasaaraha. Istaraatiijiyad aan khatar ahayn ...
Macky Sall go'aansatay qarsado ciyaarta. Madaxweynaha 'caadiga ah', inta badan marka la barbar dhigo ee uu u safto François Hollande sababtoo ah dabeecadda wanaagsan oo iska qofku shakhsiyadiisu leh in ay ka horreeyay (Wade isaga, Nicolas Sarkozy, waayo dhigiisa Faransiiska waqtiga), ma dhibaato badan waxa ay dadku sameeyaan annagaa ku sheegi iyo xisaabinta siyaasadeed yar.
In siyaasiyiinta Senegal, dad badan oo la filayo bilowga xasilloon ereyga labaad, in la sii wado ka mid ah la soo dhaafay, dowladda oo la ballaadhiyo inaan u mahadceliyo taageerayaasha badan ee xilli madaxweynaha halka ilaalinta daacadnimada weligeed ah. Waxay ahaayeen qalad. Taa bedelkeeda, waxay arkeen wax aad u xun. Labaatan xubnood oo ka tirsan kooxdii hore ayaa u mahad celiyay karti-xirfadeedkooda iyo baxsadahoodii, dawladda cusub ha xisaabin
Awood-baahinta - Ngala Gerard: "Haddii aan rabno in aan gobollada ka dhiganno madax-bannaan, waa in aan si wax-ku-ool ah u qabannaa oo aynaan ahayn facade"